Dayaca iyo burburka wadooyinka Hargeysa, ismahadinta Mayer solteco ee aaminsan inuu magaalada waxweyn uu ka qabtay iyo mooganaanta shacbiga ku dhaqan Hargeysa | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Dayaca iyo burburka wadooyinka Hargeysa, ismahadinta Mayer solteco ee aaminsan inuu magaalada waxweyn uu ka qabtay iyo mooganaanta shacbiga ku dhaqan Hargeysa
Published on September 30, 2019 by sdwo · No Comments
Magaalada Hargeysa waxa maalinba maalinta ka danbaysay dibada u soo baxaya sida maamulka dowlada hoose ee Hargeysi ay u hagradeen dhismaha caasimada iyadoo cashuurta dadka xooga lagaga qaadana aanay waxba hagaagsan ugu qabanin ee si indho sarcaad ah wadooyin ciid u badan ay dadka u tusaan inay wadooyin u sameeyeen. Wadooyinka ayaa markiiba roobka u horeeyaa uu baabiiyaa oo uu ka dhigaa goob lama degaan ah oo ceelcal xoolaha laga waraabin karaa ka dhexqodmaan.
Sida sawiradan ka muuqata halkani maaha koonayaasha Hargeysa ama tuulo ka mida tuulooyinka Somaliland waa badhatamahii caasimada ama dhulka loo yaqaan wadanaha magaalada. Waa wadooyinkii baabuurta oo intay burbureen godod ka qodmeen. Sida waraysigii mayer solteco uu Horn Cable TV uu siiyey isagu weli waxa uu ku jiraa isdifaac iyo darifaad iyo isamaanid uu leeyahay wadooyin baanu dhisnaa. Waa ninka ku andacoonayey anagoo dadka cashuur ka qaadna hadana waa qasab in wadooyinka iyaga hor marna ay qayb bixiyaan.
Dhamaan golaha deeganka Hargeysa ayaa heshiis ku ah una heshiyey cashuurta dalka, sababtoo ah weligaa maqlimaysid mooshin ka dhan ah mayerka ayuu golahii soo diyaariyey, waxaana la sheegaa in ay xubnahaas 25ka ahi ay ku heshiyeen inay qaybsadaan dakhliga ka soo baxa cashuuraha kala duwan.
Shacbiga hadaba wax la gudboon inay hurdada ka toosan oo aanay daawan burburla laxaadka leh ee ku yimid caasimada oo ay la xisaabtamaan dadkii ay doorteen. Waxa la gaadhay xiligii dowlada hoose baanbaxyo lagu hor istaagi ilaahaa oo la hor taagnaan lahaa oo la hor seexan lahaa ilaa ay is casilaan oo ay kuraasta sharci darada ah ee ay ku fadhiyaan banaynlahayeen. Sharicigii ay ku fadhiyeen ayaa dhamaaday 29kii Bishii March isagoo madaxweyanhuna diiday inuu mudo kordhin u sameeyo hadana ay weli sii fadhiyaan.